SAWIRO:-Soomaali banaanbax ka dhigay dalka Koonfur Afrika - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO:-Soomaali banaanbax ka dhigay dalka Koonfur Afrika
SAWIRO:-Soomaali banaanbax ka dhigay dalka Koonfur Afrika
Bilihii la soo dhaafay waxaa dalka Koonfur Afrika kusoo batay Kooxo burcad ah oo Soomaalida Ganacsiga ku heysata Magaalooyin kamid ah dalkaas u geysanaya dil iyo in la boobo hantidooda, waxaana aarintaas walaac xoogan ka muujiyay Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika.
Qaar kamid ah Soomalida ku nool Xaafadda Bellville ee Magaalada Capetown ee dalka Koonfur Afrika ayaa ku hor banaanbaxay Xarunta Maxkamada Cadaaladda, iyaga oo diidan in Damaanad lagu siidaayo Koox Burcad ah oo lagu eedeeyey Afduubka Muwaadiniinta Soomaaliyeed mudooyinkan dambe ka socday Cape Town.
Eedeysanayaasha, oo tiro ahaan gaaraya Sagaal Ruux, ayaa gacanta lagu dhigay maalmo kahor xilli ay ku sugnaayeen goob aan la shaacin oo ay Afduub ugu haysteen Macalin Dugsi-Quraan oo Soomaali ah, kaasi oo ay dhawaan ka khafaasheen Xaafadda Soomaalida ee Bellville.
Soomaalida banaanbaxa dhigayay ayaa dalbnayay in Cadaaladda la marsiiyo Kooxda Burcadda ah, su ay u yaraato dhibaatada lagu haayo Soomaalida oo si joogto ah uga dhaca Magaalooyinka Koonfur Afrika.
Saandkaan 2021 ayaa Gudaha dalka Koonfur Afrika waxaa Kooxaaha Burcadda ah ay ku dileen Soomaali farabadan, halka qaarkood ay boobeen Goobo Ganacsi, iyada oo ilaa iyo hadda dhibaatadaas aysan waxba ka qaban dowladda Koonfur Afrika.
Previous articleCiyaaryahan ka tirsanaa xulka Qaranka Soomaaliya oo geeriyooday
Next articleDFS oo sheegtay in dib u eegis lagu sameeynayo heshiisyada lala galay Masar